Articles THUMAAMA BINU UTHAAL Category: warka	Published on 22 August 2012	Hits: 1073	Sannadkii lixaad ee hijriyada wuxuu Rasuulka (scw) go'aan ku qaatay inuu ballaariyo dadaalkii uu ugu jiray fidinta dacwada islaamka, isagoo siddeed dhambaalood oo qoraal ah u kala diray boqorrada carbeed iyo kuwa cajam-ba, wuxuuna dhambaaladiisa ugu yeeray boqorradaas inay soo galaan diinta islaamka. Boqorradaas loo diray dhambaaladaas ayaa waxaa ku jiray Thumaama Binu Uthaal Al-Xanafi. La yaab ma lahan inuu Thumaama ka mid ahaa madaxda iyo boqorrada carbeed waqtigii jaahiliga ee islaamka kahor. Wuxuu ka mid ahaa madaxda reer Banii Xaniifa, sidoo kale wuxuu ka mid ahaa boqorrada reer Yamaama ee aan amarkooda marnaba la khilaafin.
Dhinaca kale, wuxuu Rasuulka (scw) amray in hashiisa looga liso Thumaama subixii iyo galabtii, loona geeyo si uu dhamo caanahaas. Maamuusiddaas iyo wanaaggaas uu Rasuulka (scw) u qaddimayo Thumaama waxay dhacday kahor intuusan xabiibka Suubbanaha Rasuulka (scw) la kulmin ama uusan la hadlin Thumaama bin Uthaal. Intaa dabadeed, wuxuu Rasuulka (scw) soo aaday xaggii Thumaama, isagoo doonaya inuu si tartiib ahaan uu u soo geliyo diinta islaamka. Wuxuu Rasuulka (scw) ku yiri Thumaama: “maxaad haysaa Thumaamow?”. Thumaama wuxuu yiri “waxaan hayaa kheyr Muxammadow.., haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddaad gallad sameysid-na waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddiise aad doonaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin’e’’. Wuu isaga tagay Rasuulka (scw), isagoo Thumaama ku xirnaa tiirkiisa labo maalmood, halkaasna loogu geynayo cuntada iyo cabbitaanka, loogana soo lisayo hashii Rasuulka (scw). Maalintii danbe ayuu Rasuulka (scw) u yimid Thumaama, wuxuuna markale ku yiri “maxaad haysaa Thumaamow?”. Thumaama wuxuu yiri, ma hayo waxaan ka ahayn hadalkii aan horey kuugu iri, haddaad gallad sameysid waxaad ku galladaysatay qof kugu mahadinaya, haddaad dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddiise aad daanaysid maal, weydiiso intaad doontid ayaa lagaa siin’e..
Thumaama Binu Uthaal Ilaah ha ka raalli noqdee wuxuu ahaa muslimkii ugu horeeyay ee gala magaallada Makka, isagoo talbiyeysanaya. Markii ay qureysh maqleen dhawaaqii Thumaama ayaa waxay hal mar ku soo qamaameen xaggiisa, iyagoo aad uga careysan falka Thumaama. Waxay la soo baxeen seefahooda, iyagoo soo aadayna dhinacii ka soo yeerayay dhawaaqii Thumaama, si ay u qabtaan ninkan ugu soo galay buulkoodii ama goobtii ay degganaayeen. Codkii Thumaama wuxuu cirka isku sii shareeray markii ay u soo dhowaadeen oo ay u yimaadeen qureysh, weliba isagoo si geesnimo ku jirto u eegayo xaggooda. Mid ka mid ah dhalinyaradii qureysh ayaa damcay inuu ku dilo Thumaama seeftiisa, hase ahaatee tolkiisa ayaa qabtay, iyagoo ku yiri “war miyaadan aqoonin ninka aad u fa-fakanaysid, waa Thumaama Binu Uthaal ee ahaa boqorkii Yamaama, wallaahi haddaad u geysatid dhibaato waxaa hubaal ah inuu naga jarayo sahaydii aynu heli jirnay, dabadeedna gaajo ayeeynu u dhimanaynaa”. Intaa kadib, qureysh waxay aadeen xaggii Thumaama kadib markay seefahoodii ku cesheen galalkii ay ku jireen, waxayna ku yiraahdeen “ma waxaad ka baxday diintaadii iyo diintii ay haysteen aabayaashaadii hore”. Thumaama wuxuu yiri “kama tegin diintayda, hase ahaatee waxaan raacay diin tan ugu kheyrka badan..., waxaan raacay diintii Nebi Muxammad”, wuxuuna intaa ku daray “Rabbiga kacbadan leh ayaan ku dhaaranayaaye inaydan idin soo gaari doonin kadib markaan ku laabto Yamaama kheyraatka Yamaama ka yimaada jeer uu kiina ugu danbeeya ka raaco Nebi Muxammad” .
Intaa wixii ka danbeeyay, Thumaama Binu Uthaal intuu noolaa oo dhan wuxuu ahaa kii u hoggaansama diinta, aadna u ilaaliya oo fuliya ballamihii Nebiga (scw). Markii uu Rasuulka (scw) la kulmay Allihii sarreeyay, uuna geeriyooday, markaasna ay carabtii billaabeen inay isaga laabtaan diinta iyagoo koox-koox ah, ayaa istaagay Musaylamata Al-kadaab kana dhashay qabiilka reer Banii Xaniifa isagoo dadka ugu yeeray inay isaga rumeeyaan. Haddaba, waxaa istaagay Thumaama Binu Uthaal, isagoo tolkiisa u digaya kuna oranaya “reer Banii Xaniifow waxaan idiinkaga digayaa arrinkan mugdiga leh ee aan lahayn iftiinka. Wallaahi ayaan ku dhaartaye waxay ayaan-darro haysataa qofkii rumeeya Musaylamata, dhinaca kale waa imtixaan lagu eegayo qofkii aan isaga rumeyn”, wuxuu kaloo Thumaama tolkiisa ku yiri “Reer Banii Xaniifow waxaa hubaal ah inayan labi nebi wada kulmi karin hal waqti, Nebi Muxammad waa Rasuulkii Alle mana ka danbeeyo gadaashiis Nebi kale, mana jiraan nebi lala wadaajiyo isaga nebinimada, dabadeedna wuxuu aqriyay billoowga suuradda Qhaafir ee uu Eebbe (sw) ku leeyahay:
“Xaamiim (oo ka mid ah ereyada mucjisooyinka ku tusinaya, Alle ayaa og macnaha loola jeedo), soo dejinta kitaabka waxay ka ahaatay Allaha casiiska ah ee og wax walba. Waa Allaha dhaafa denbiga, aqbalana towbadda ayna ciqaabtiisu daran tahay ee leh nimcada badan Ilaah kale aan isaga ahayn ma jiro, xaggiisana ayaa loo noqon.”. Isagoo Thumaama is barbardhigayo hadalkaas Eebbe (sw) leeyahay, iyo hadalka ninka sheeganayo in isna lagu soo dejiyay aayado qur’aan ah. Thumaama wuxuu yiri ma hadalkii Eebbe (sw) ayaa lala barbardhigi karaa hadalka Musaylamata uu ku leeyahay “ rahow iska ciy, cabbitaana ma diidi kartid, biyahana ma wasakhayn kartid”. Intaa kadib wuxuu Thumaama gooni ula baxay intii diinta islaamka ku hartay, ee ka mid ahaa tolkiisa. Way tageen iyagoo si jidka Alle ula dagaalamaya dadkii ka riddoobay diinta, iyagoo sidaas u sameenayayna si kalimadda Alle ay u kor ugu noqoto dunida.